.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: Any Video Converter Ultimate
Video ဖိုင်တွေကို ဖော်မက် အမျိုးမျိုး ပြောင်းချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် ဒီ Any Video Converter Ultimate က
သုံးရတာ အရမ်းကို အဆင်ပြေပါတယ်။ ပြောင်းလို့ ရတဲ့ ဖော်မက်တွေကလည်း အရင်ကထက် အများကြီး စုံလာပါပြီ။
Apple iPhone, Apple iPad, Apple iPod, Apple TV, Android Tablets, Sony PSP, Sony PS3, Sony Walkman,
Microsoft Zune, Archos, Creative Zin, iRiver, Sandisk SanSa, Microsoft Xbox 360, Nintendo Wii, Mobile
Phones, Blackberry , Nokia, Android Phones, Windows Mobile, Flash Video, Toshiba Gigabeat, Common
Video Formats, HTML5 Embed Video, Common Audio Formats, DVD Movie စတဲ့ ဖော်မက်မျိုးစုံပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် You Tube က Video ဖိုင်တွေကို ဒေါင်းလုပ်ချနိုင်သလို Video Record လုပ်နိုင်တဲ့ Tool တစ်ခုရော ပါပါတယ်။
ဒီလောက်ကောင်းတဲ့ ဆော့ဝဲလ်ကို မူရင်းဝဘ်ဆိုဒ်က အလကားတော့ သုံးခွင့် မပေးပါဘူး။ အောက်က ပုံကို ကြည့်ပါ။
အဲဒါကို အနော်က Patch ဖိုင်လေးနဲ့ Full Version ဖြစ်အောင် လုပ်ပြီးမှ Portable လေးထပ်လုပ်ပြီး တင်ပေးတာပါ။
Youtube က Video တွေ ဒေါင်းမယ်ဆိုရင် Add URLs ကို နှိပ်ပြီး Youtube က ဒေါင်းချင်တဲ့ Video ဖိုင် စာမျက်နှာရဲ့
Link ကို ကော်ပီကူးထည့်ပြီးတော့ Start Download! ကို နှိပ်လိုက်ရုံပါပဲ။ Video Record ပါ လုပ်လို့ရပါသေးတယ်နော်။
ကဲ Video ဖိုင်တွေကို ဖော်မက် အမျိုးမျိုးပြောင်းချင်တယ် ၊ Youtube က Video တွေ ဒေါင်းယူချင်တယ် ၊ နောက်ပြီးတော့
Video Record တွေ လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် ဒီ Any Video Converter Ultimate လေးပါ ဒေါင်းပြီး ဆောင်ထားကြပေတော့။
ဒီ ဆော့ဝဲလ်လေးကို ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင် Full Version ဖြစ်အောင် လုပ်ပြီးမှ သူငယ်ချင်းတို့ အားလုံး အသုံးပြုရတာ
လွယ်ကူသွားအောင်လို့ Portable လေးလုပ်ပြီးတင်ပေးလိုက်တာပါ။ ကူးယူမျှဝေမယ်ဆိုရင်တော့ Credit ပြန်ပေးကြပါ..။
Version: 4.3.5 [ Full Portable ]
Posted by Thurainlin at 07:36